Garaadso Intaadan Guursan (Q- 1aad) | Daarulcilmi.com
Garaadso Intaadan Guursan (Q- 1aad)
Submitted by admin on Sun, 01/12/2014 - 12:42
Garaadso Intaadan Guursan
Haddii aad go'aan qaadatoo guurba aad damacdo
Inta aadan galinbaa gudboon inaad gorfeysaaye
Ood gunteeda baartaa waxaad damacday geeloowe
Ninkii kaa gu' weyn iyo ninkii garasha kaa dheer leh
Iyo geedka kii tagi jiriyo goobihii kulanka
Iyo kii hortaa guursadaa qeyb la galiyaaye
Oo go'aanka aad damacsantahay lala gorfeeyaaye” ~ Amiin Sheikh Maxamed
Waxaa hubaal ah, gabadh iyo wiil kastoo guurdoon ah, oo maantadunida guudkeeda jooga inuu ku haminayo siduu ku heli lahaa ama ku hanan lahaa qof wanaagsan oo ay nolosha wada qaybsadaan. Waxaa hubaal ah haddaad tahay guurdoon , in aad dooneyso qof aad nolosha macaankeeda isla qeybsataan,qof aad mugdiyada nolosha aadamaha soo foodsaara iska weheshataan, qof aad isku noqotaan muraayad oo midba midka kale isku daawado, qof uu Eebbe idin kala siiyo awlaad aad ku indho qabowsataan, qof aad nolosha inta idiinka dhiman iska soo ag toostaan, iyo weliba qaar kaloo badan oo aanan qoraal kaga soo gayoon karin. Run ahaantii, waa nolol dhan oo aan qoraal lagu soo koobi karin. Hadaba waxaa is weydiin mudan, sidee lagu helaa qof wanaagsan? Inta aanan idiin far fiiqin qofka wanaagsan sida lagu helo ama dadka lagaga garto, aan ku weydiiyo su’aal. Guurdoonyahow dhowrsani maxaad ku dooran lahayd gacalka aad dooneysid xitaa hadduu Rabbi idin gaarsiiyo 100 sano inaad iska soo ag toostaan? Waa su’aal da’weyn oo dadka guurdoonka ah qaar badan oo ka mid ihi jawaabteeda saxda ah ay hareer maraan. Waa arrin inta badan qofka guurdoonka ah ay ka qariyaan wax yaabo kale oo dhalanteed ah. Waa su’aal u baahan in uu qofka guurdoonka ah, waxbadan ka fiirsado jawaabteeda; islamarkaana uu isku dayo in ay bal jawaabtiisu tahay mid guul u horseedi karta. Maanta waxaan joognaa wakhti ay noloshii isbeddashay, wakhti ay dadkii isku ekaadeen, oo qofka xun iyo kan fiican ay adagtahay inaad kala garatid, wakhti is aaminiddii ay yaraatay. Hadduu Rabbi idmo waxaan qormadaydan kaga jawaabi doonaa su’aalo dhowr ah, oo ay ka mid yihiin:
1. Maxaa la’iiga baahanyahay inaan noqdo inta aanan raadin qof wanaagsan
iyo weliba talooyin badan, oo ku aaddan sidaad u abuuri lahayd geed hadh weyn oo islamarkaana miraha kaaga baxaa ay yihiin kuwo macaan.
Qormadan, oo hadduu Rabbi idmo taxane noqon doonta, qeybaheeda horana aan wiilasha kula hadli doono ayaa waxaan u hibeeyey dhallinta Soomaaliyeed ee guurdoonka ah iyo wiliba qof kastoo jecel inuu yagleelo (dhiso)guri iyo sowjad (Xaas) sabab u noqota inuu ku naaloodo(raaxaysto) nolol ey farxad, xasillooni , deganaan iyo jaceyl ku dheehanyihiin . Waxaa la yiraahdaa,
(Nolosha macaankeeda muusan dhadhamin qofkii aan laheyn xaas uu ku xasilo oo uu ku dego)
Isku day inaad noqoto qof dhowrsoon marka hore, qof Alle ka baqa, qof ku xiran diinta Alle. Haku mashquulin inaad raadiso qof wanaagsan adoon taada marka hore wanaajin. Marka hore wiilyahow noqo Maxammed dhowrsoon waxaad heleysaa Khadiijo dhowrsoone. Qofkii wanaagsan wuxuu helaa qof wanaagsan, qofka xunna wuxuu helaa qof xun. Sidaa daraadeed naftaada wanaaji Eebena ma dayici doono dedaalkaaga, oo wuxuu kuu sahlayaa qof dhowrsoon oo aad adduunyada raaxo kuwada noolaataan.
“Gabar dhawr tilmaamood ayaa sababa guurkeede
Ø Diin ku dooro: Gabadha diinta lihi waa tan garanaysa siday u gudan lahayd xaqa uu ninkeedu ku leeyahay, siday u dhawri lahayd asraarta gurigeeda iyo nafteeda, carruurtana ugu barbaarin lahayd tubta toosan. Run ahaantii nin nasiib leh ayaa hela gabadh diin leh. Gabadha diinta leh waa furaha nolosha. Waa qof adduunyadaada iyo aakhiradaadaba kuugu kaalmeyneysa wanaaga. Lammaanahaaga ha ku qiimeyn qurux keliya, ha ku xulan xoolo keliya, ha ku raacin reer keliya, ee ku dooro diin. Hadduu Ilaahay ku siiyo gabadh diinna leh, quruxna leh waa mahad Alle, haddii aad hesho gabadh diinna leh, xoolana leh waa mahad Alle, haddii aad hesho gabadh diinna leh, reer magac lehna ka dhalatay waa mahad Alle, laakiin diintu hakuu noqoto shuruudahaaga midda ugu horreysa ee aad wax ku doorato, kedibna wuxuu Ilaahay kuu raaciyo diin wanaageeda oo nasab, maal, iyo qurux ahna, ay kuu tahay nimco dheeraad ah. Gabadh diin leh marka hore raadi, iyadaa laga helaa nolosha raaxadeeda. Xadiis uu Abdullaahi ibn Cumar Ibn Caas warinayo buu nabiga (csw) ku leeyahay;
Haddaad dooni guri raaxaloo aan dhib kugu gaarin
Oon biilkii wuu go'ay laheyn amase wuu gaabtay
Kala garo wixii kugu gafiyo wixii gudboonkaa ah
Ø AKHLAAQ IYO DHAQAN WANAAG KU DOORO: Waxaan joognaa xilli dhaqankii wanaagsanaa uu sii gabaabsi yahay, xili akhlaaqdii suubaneyd ay god madow kusii aroorayso, xilli xishoodkii iyo xayadii lakala dhaqaaqay. Waa lagama maarmaan inaad akhlaaqda iyo dhaqankeeda ka eegto gabadhaad guursaneyso. Umaduhu waxay ku dhisanyihiin akhlaaq iyo qiyam, haddey akhlaaq iyo beelaan qiyam way burburaan, Xadiis uu warinayo Abu Saciid Al Khudriy oo uu ka warinayo Nabigu CSW wuxuu inoo tilmaamayaa;
Mar kale wuxuu nabigu leeyahay CSW
Ø DABEECAD WANAAG KU DOORO: Dabeecaddu waa muhiim. Waa muhiim ineey labada qofi isku dabeecad yihiin, dad is fahmaya oo nolosha isku si u arkaya yihiin. Dabeecaddu waa qeyb ka mid ah is fahanka, labada qof. Haddey labada qof is dabeecad fahmaan waxaa hubaal ah ineey nolosha inteeda kalena isku fahmayaan, haddiise labada qof dad is dabeecad fahmaya eysan aheyn waxaa hubaal ah inuu gurigaa ku dambeynayo burbur iyo kala haad.
ü Waxaa laga helaa inta badan masaajidda, maraakista diinta lagu barto iyo guri diinta Alle saldhig uu u tahay
ü Waxaa lagu gartaa gabdhaha ay saaxiibada yihiin had iyo jeer oo ah kuwa diin leh
ü Waxaa lagu gartaa oo astaan u ah in ay had iyo jeer xijaabkii Alle ku waajibyeelay xirantahay.
ü Waxaa lagu gartaa xishoodka joogtada ah. Waa gabar had iyo jeer xishood dheeraad ah aad wajigeeda, socodkeeda iyo hadalkeeda ka dheehaneysid
ü Waxaa lagu gartaa qoyska ay ka soo jeeddo dhaqan wanaagiisa. Haddey hooyadeed iyo aabbeheedba yihiin dad aan bulshada magac iyo sumcad sare ku laheyn oo aan bulshada wax qiima ah ku lahayn, waxey u badantahay ineey gabadhoodana wanaag badneeyn, sababtoo ah inta badan dhaqanka waa la iskaga daydaa.
ü Waxaa lagu gartaa markaad haasaaweysaan ineysan ahayn mid hadal kugu dardarta oo afka ku goosata (Waa hadaadan xumaan kula hadlin)
ü Waxaa sidoo kale lagu gartaa markaad haasaaweysaan ineey tahay gabadh had iyo jeer wixii Rabbi xadeeyay ee sharci ah, aan ku xadgudbin adna aan kaa ogalaan inaad ku xad gudubtid.
ü Waxey caro awgeed isdaba martaa markaad kala hadasho wuxuu san Ilaah SWT Raalli ka aheyn
ü Waxey kaala sheeykeysataa mustaqbal iyo sidii aad u yagleeli lahaydeen guri Illahay raali ka yahay.
ü Waxeey tix galisaa ehelkaaga iyo qaraabadaadaba.
ü Waxey ka ag fogaataa oo ku xajiimootaa dumarka caariyaadka ah. (Ineey dacwo iyo diin u gudbineyso mooyaane)
ü Kuguma xirto inaad u dhigto aroos qaaliya, gawaari badan oo lagu galbiyo, qasri qaaliyoo la dejiyo iwm
ü Haddey gaajeysantahay iyo haddey dharagsantahayba cabasho kama maqleysid, oo waa gabar ku qanacsan wuxuu Alle siiyay. Waa gabar uu Rabbi qanaaco siiyay. Gabayaagii xakiimka ahaa wuxuu yiri;
sacab madhan ka xeel-dheer,
qanacood ka sooftaa,
ugu daran saboolnimo”
ü Waxaa hadalkeeda, muuqeeda, socodkeeda, dharkeeda, asxaabteeda, meelaha ey joogta had iyo jeer laga dheehdaa, laga dareemaa muuqaal uu Rabbi raali ka yahay.
Iyo wiliba qaar kaloo badan oo uu wiilka dhowrsani maskaxdiisa dhowrsan ka dhex heli karo.
4. TALOOYIN GOOS-GOOS AH OO U GAAR AH WIILKA GUURDOONKA AH
· Garaadso intaadan guursan, u diyaar garow noloshaad dooneyso inaad abuurto.
· Ha guursan hadaadan u heyn aqal iyo qalbi aad dajiso walaashaa
· Iska fiiri qoyska ay gabadha ka dhalatay, hooyadeed, aabbeheed, walaaleheed iyo wiliba saaxiibadeedba, sababtoo ah dadku waxeey isku yeeshaan saameyn aad u ballaadhan.
· Haddaad dooneyso guur xalaal ah, shukaansigaaga u mar waddo xalaal ah.
· Ogow ninkasta wuu awoodaa inuu xaas guursado oo caruur dhalo, laakiin nin kasta ma awoodo inuu xaaskaas iyo caruurtaas mas’uuliyadooda qaado
· Haku dheeraan mudada aad gabadha wada sheekeysanysaan. Inta badan waxaa dhacda in muddo intii la wada sheekeysto, oo xiisuhu dhammaado, kadibna la kala dhaqaaqo.
· Haddaad rabtid inaad waddamada reer galbeedka ku dhex guursatid, guurso gabar ay u joogaan hooyo, aabbe iyo wiilal la dhashay, kuwaasoo bulshada dhexdeeda ka maamuusan, ku leh magac iyo mansabba. Sababtoo ah dhulkaad joogtid waa dhul dhib badan, waa dhul dumarka awood loo siiyay sidii iney iyagu ninka furi karaan oo kale, taas oo sababtay shacbiyadda reer galbeedka, furriinku inuu ka marayo 60% (Boolkiiba lixdan). Nasiib xumo waxaa dhacday dumarkii muslimaadka ahaa markey dhulalka reer galbeedka yimaadeen iney iyaguna is bedalaan, oo dhaqankaa ku qancaan qayb yar, oo Ilaahay u naxariistay mooyaane. Sidaa daraadeed waa gaashaan inaad guursatid gabadh hooyadeed, aabbaheed iyo walaalkeed oo weliba bulshada sumcad ku leh, inaad guursatid.
· Gabadha aad guursaneysid iyo adiga dhexdiina ku abuur geed hadh weyn oo kalsooni la yiraahdo.
“Aas aaska guurkiyo
Aqal waxa adkeeyoo
Udubada u taagaa
Ogow waa kalsoonida
Iyo unugga caashaqa”
· Haka welwelin waxaad siin lahayd iyo waxaad ku dhisan laheyd reerka marba haddaad tahay qof raba inuu dhameystiro qeyb diintiisa ka mid ah, waayo Rabbi baa kaa kafaalo qaaday. Xadiith Abaa Hureyra (RA) uu warinayo oo xassan ah buu nabigu (SAW) ku leeyahay ;
“ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح الذي يريد العفاف “
(Saddex qof wuxuu Alle dushiisa waajib isaga dhigay inuu u kaalmeeyo: Qofka Illaahay wadadiisa ku jihaadaya, Ninka adoonka ah ee raba inuu xoroobo iyo Ninka guursanaya , guurkana ka rabo inuu ku dhowrsado)
· Gabadhaad guursaneyso iska fiiri, ma haweenkii horee wanaagsanaa bey waddadoodii heysaa mise kuwan maanta jooga ee nolosha xaqiiqadeeda ka leexday bey jidkooda haysaa. Waxaa la yiri berigii hore, saddex baa dumarka loo guursanjiray, saddex baa beddashay, saddex baase bi’iyay.
Saddex baa dumarka loo guursan jiray
Fiqiga Xajka Q1aad
Sh.Maxamed Cumar Dirir